China Phase Kudzora Thyristor fekitori nevatengesi | Runau Electronics
Chikamu Chekudzora Thyristor (Alloying Rudzi)
Thyristor, inozivikanwawo seSilicon Control Rectifier (SCR), inesimba-semiconductor chishandiso chine matatu PN zvivakwa. Panyaya yekuita, iyo thyristor haisi chete ine unidirectional kuitisa, asi zvakare ine yakakosha kudzora kupfuura iyo yesilicon inogadzirisa chinhu, inongova chete nyika mbiri dzekuitisa uye off-nyika, kudzora simba hombe nesimba diki, simba kukwidziridzwa kusvika kumazana kana zviuru nezviuru. Mhinduro yacho inokurumidza kwazvo, kutendeukira uye kudzima muma micro-seconds Isiri-yekudyidzana oparesheni, hapana anopenya, hapana ruzha, nepo yakanyanya kushanda uye yakaderera mutengo. Naizvozvo, kunyanya mune yakakwira magetsi magetsi system, thyristor yanga ichishandiswa zvakanyanya mugadziri redunhu, static yekupfuura switch, isina-yemahara goho switch uye mamwe maseketi.
Iyo thyristor yekugadzira standard uye yekugadzirisa tekinoroji yeRUNAU Electronics yakaunzwa kubva kuUSA kubvira 1980s, sepiyona wekugadzira thyristor muChina, timu yehunyanzvi yeRUNAU yakanga yawana ruzivo rwekucheka-ruzivo uye ruzivo rwakakwana rwekugadzira kweanopfuura makore makumi matatu. Pamusoro pechinyakare chetsika yekugadzira maitiro, matarenda ehunyanzvi eRUNAU Electronics anga agadzira hunyanzvi-hwe-nyika tekinoroji mukugadzira thyristor ine mukana maficha ezvigadzirwa zveEuropean, mhando uye mashandiro anovandudzwa zvakanyanya, mamwe mahombe mahombe akawanikwa mukushandisa kwesimba zvemagetsi. minda, uye kukosha kwakawanda kwakagadzirwa kwevamwe
Iyo thyristor chip inogadzirwa neRUNAU Electronics is sintered alloying tekinoroji yakashandiswa. Iyo silicon uye molybdenum wafer yaive sintered yekukwirisa neiyo pure aluminium (99.999%) pasi peyakakura vharuvhu uye yakanyanya tembiricha nharaunda. Iyo manejimendi yeanopisa hunhu ndicho chinhu chakakosha kukanganisa hunhu hwe thyristor. Iyo yekuziva-kweiyo RUNAU Electronics mukuwedzera kubata iyo chiwanikwa junction kudzika, pamusoro flatness, chiwanikwa mhango pamwe izere nekupararira hunyanzvi, wepakati gedhi, mhete denderedzwa pateni yakaiswa kugonesa yakavimbika uye yakakwira inoshanda kuitisa mashandiro e thyristor, kuti chengetedza kuita kwemhando yepamusoro.
Nekuomesa kudzora kwekubata uye kuenzanisa kwemolybdenum wafer uye yekunze pasuru, iyo chip uye molybdenum wafer ichave yakabatanidzwa neyekunze package zvakanyanya uye zvakakwana. Izvi zvinowedzera kukwikwidza kwekuwedzera kwerazvino uye yakakwira pfupi pfupi yazvino magetsi. Uye kuyerwa kweelectron evaporation tekinoroji kwakashandiswa kugadzira gobvu yealuminium firimu pane yesilic wafer pamusoro, uye ruthenium dura rakafukidzwa pane molybdenum pamusoro ichawedzera kupisa kwekuneta kupokana zvakanyanya, iro basa rehupenyu nguva ye thyristor ichawedzerwa zvakanyanya.
Phase inodzorwa thyristor ine alloy mhando chip inogadzirwa neRUNAU Electronics, renji yeITAV kubva 300A kusvika 6000A uye VDRM/ VRRM kubva 800V kusvika 4400V.
IniTSM @TVJIM & 10ms
@IT& TJ= 25℃
Voltage Kusvikira 1800V
KP320 - **
KP400 - **
KP600 - **
KP800 - **
KP1000 - **
KP1200 - **
10.0 × 105
KP1500 - **
KP1800 - **
KP2500 - **
KP3000 - **
KP4000 - **
KP6000 - **
26.0 × 106
Voltage Kusvikira 2400V
KP500 - **
2000 ~ 2400
KP2100 - **
KP5700 - **
23.0 × 106
Voltage Kusvikira 3200V
2600 ~ 3200
KP1700 - **
KP2000 - **
KP3700 - **
KP4500 - **
Voltage Inosvika ku4200V
KP480 - **
3600 ~ 4200
KP1900 - **
KP3800 - **
Pashure: Yakakwira Standard Phase Kudzora Thyristor
Zvadaro: Anogadzirisa diode Chip